अबदेखि ‘भद्रगोल’ मा पाँडे र जिग्री नहुने, को बन्दै छ 'डन' ? - Lokpath Lokpath
२०७६, २० भाद्र शुक्रबार १५:१२
अबदेखि ‘भद्रगोल’ मा पाँडे र जिग्री नहुने, को बन्दै छ ‘डन’ ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २० भाद्र शुक्रबार १५:१२
काठमाडौँ । केही समय अगाडि बन्द भएको चर्चित हाँस्य टेलीशृङ्खला ‘भद्रगोल’ आजबाट नयाँ कथावस्तु, नयाँशैली र नयाँ कलाकारसाथ प्रसारणमा आउने भएको छ ।
यसअगाडि यो शृङ्खला निर्माण अभिनय गर्दै आएका कुमार अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’, कट्टेल ‘जिग्री’ लगायतको टीमले छोडेपछि यो श्रृखला नयाँ शैलीमा आउन लागेको हो ।
अहिले प्रसारण हुन लागेको ‘भद्रगोल’ नक्कली बाबुराम बनेर चर्चा कमाएका ज्योति काफ्ले र अशोक धितालको निर्देशनमा आउन लागेको हो । असोक यस अगाडि पनि उक्त शृङ्खलामा बाहुन डनको चरित्र निर्बाह गर्दै आएका छन् ।
काफ्ले भने भद्रगोलमा मङ्गल थाडु बनेर देखिँदैछन्, भने अशोक धिलात बाहुन डन बनेर आउने भएका छन् । सुजित थापा, राधा श्रेष्ठ, राम बुढाथोकी, अनुमति नेपाली, राजु भुजेल, अर्जुन तिमिल्सिना आदि कलाकारको समेत यो श्रृखलामा अभिनय रहनेछ ।
‘भद्रगोल’का निर्देशकसमेत रहेका अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ले केही साता पहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत् एक लामो स्टाटस पोष्ट गर्दै ‘भद्रगोल’ बन्द भएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
करिब तीन बर्षदेखि निरन्तर प्रसारण हुँदै आएको ‘भद्रगोल’ छोटो समयमा नै दर्शकमाझ लोकप्रिय बन्न सफल भएको थियो । यस अघिको भद्रगोलको निर्देशन अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ र कुमार कट्टेल ‘जिग्री’ ले गर्दै आउनुभएको थियो। यसमा अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे र कुमार कट्टेल ‘जिग्री’, रक्षा श्रेष्ठ लगायत कलाकारको अभिनय रहँदै आएको थियो ।
नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शुक्रबार साँझ ८ः३० बजे प्रसार हुँदै आएको यो शृङ्खला अहिले पनि सोही समयमा प्रसार हुने बताइएको छ ।
यसैबीच अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ ले आफुहरुले सिर्जना गरेको ‘भद्रगोल’ बिना जानकारी मिडिया हबले दर्ता गराएको र आफुहरुले पाउनुपर्ने पैसा नपाएकाले छोडेको बताउनुभएको छ । उहाँले नयाँ टेलीसिरियलबारे छलफल भइरहेको लोकपथलाई जानकारी दिनुभयो ।
अमिताभले गरे यस्तो ‘ट्वीट’, उनको स्वास्थ्यअवस्था बारे के भन्छ अस्पताल ?
काठमाडौं । कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि बलिउड नायक अमिताभ बच्चन र अभिषेक बच्चन
समुन्द्र किनारमा सनी लियोनीको मस्ती, हेर्नुहोस् तस्वीरमा
काठमाडौं । बलिउड एक्ट्रेस सनी लियोनी सोसल मिडियामा धेरै एक्टिभ रहन्छिन् । हालै
ऐश्वर्या राय बच्चनको कोरोना रिपोर्ट आयो
काठमाडौं – बलिउड अभिनेत्री तथा १९९४ कि विश्वसुन्दरी ऐश्वर्या राय बच्चन र जया
सान फ्रान्सिस्को । आमेजोन कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई “सुरक्षा जोखिम” भएको कारण देखाउँदै आ–आफ्नो
सौन्दर्यका लागि महिलाले भुलेर पनि नगरौँ यी कुरा !
बाँदरले लुट्यो लाखौँ रुपैयाँ, सबै हेरेको हेर्यै !
सपनामा काटिएको अङ्ग देख्नु शुभ कि अशुभ ?
कोरोना विश्व अपडेटः मृतक संख्या ५ लाख ७३ हजार नाघ्यो,…
सबै भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भएका यी ५ देश
विश्वमै सबैभन्दा पहिला कोरोनाविरुद्धको 'भ्याक्सीन' बनाउने रुस पहिलो
विश्वमै पहिलो कोरोना भाइरसविरुद्धको 'भ्याक्सीन' तयार, कहिले आउँछ
कोरोना अपडेटः कुन जिल्लामा कति थपिए संक्रमित ?
अनलाइनबाट चम्कियो भाग्य, रातारात बने करोडपति !
आँपको रुखबाट अचानक धुवाँ निस्किएपछि...